Soo -saareha haanta kaydinta biyaha ee FRP ultrapure China Supplier and Factory | Zhaofeng
Taangiyada biyaha ee nitrogen-xiran ee FRP ayaa guud ahaan loo adeegsadaa nidaamyada biyaha aadka u saafiga ah. Guud ahaan, marka haamaha biyaha kaydka ah loo baahan yahay in la rakibo ka dib sariirta isku qasan ama qalabka ka-saaridda korontada ee EDI, taangiyada biyaha ee nitrogen-xiran ayaa badiyaa la doorbidayaa sida haamaha kaydka waqtigaan.
Wakhtiyada codsiga ee alaabooyinka taangiga biyaha ee nitrogen-xiran ee FRP:
Sida biyaha ultrapure -ka ay ugu wasakhoobaan hawada: Sidaan wada ognahay, hawadu waxay ka kooban tahay kaarboon laba ogsaydh, bakteeriya, boodh iyo wasakh kale. Biyaha dib -u -guurku waa dareere saafi ah waxayna leeyihiin awood xooggan oo ay ku milmaan wasakhdaas. Sidaa darteed, mar haddii biyaha ultrapure -ga ay la soo xiriiraan hawo, Waxay ka dhigi doontaa iska -caabbinta si dhaqso leh. Tababbarka ayaa caddeeyay in tayada biyaha ee biyaha dib-u-hagaajinta ee ka sarreeya 15MΩ.cm ay hoos ugu dhici doonto 3-4MΩ.cm ka dib markii ay hawada soo gaadhay 1 daqiiqo, waxayna hoos ugu dhici doontaa ilaa 2MΩ.cm 3 daqiiqo ka dib.
Sidaa darteed, waxaa lama huraan ah in la yareeyo fursadda biyaha ciriiriga ah ee taabashada hawada. Hababka caadiga ah ee looga hortago weelasha biyaha dhaadheer in ay wasakhoobaan hawada:
Habka buuxinta Nitrogen -ka: Ku buuxi dusha biyaha haanta biyaha nitrogen si aad u ilaaliso cadaadis togan ee haanta oo aad ka hortagto in jawigu la xiriiro dusha biyaha ee haanta.
Habka boorsada filimka: filim boorso u eg ayaa lagu dhejiyay haanta biyaha si loo daboolo dusha biyaha, bacda filimku kor bay u kacdaa oo waxay la dhacdaa heerka biyaha si loo yareeyo aagga xiriirka u dhexeeya dusha biyaha iyo hawada.
Habka saqafka sabayn: qalab fudud oo leh cufnaan ka fudud biyaha ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo saqaf dhan oo saqafka dul sabbaysa haanta biyaha si loogu dul sabeeyo dusha biyaha, iyo agabyada laastikada iftiinka ah (sida isbuunyada, caagga la xumeeyey, iwm.) waxaa loo isticmaalaa in lagu daboolo saqafka sabayn iyo taangiga. Nadiifinta, saqafka sabaynaya ayaa kor u kaca oo ku dhaca dusha sare ee biyaha. Sidaasna lagu yareeyo fursadda in hawo lala soo gaaro dusha biyaha. Saddexda hab ee kor ku xusan, waa wax caadi ah in haanta biyaha lagu xiro nitrogen, taas oo fudud in la hirgeliyo oo saamayn wanaagsan leh.
Taangiga biyaha ee lagu xiray nitrogen ee FRP wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood:
Isha Nitrogen: sida caadiga ah waxay dooran kartaa dhululubada nitrogen cadaadis sare leh, matoorro-dhaliyaasha, nitrogen-ka nadiifsan ee hadda jira ee warshadda
Taangiga biyaha ee aan hawada lahayn: Haamaha biyaha aadka u saafiga ah waa in si buuxda loo shaabadeeyaa si looga hortago in nitrogen ka soo daato, iyo in laga hortago in hawo soo gasho taangiga si ay u wasakhayso biyaha aadka u saafiga ah.
Nidaamka kontaroolka: goorma ayaa lagu soo oogi doonaa nitrogen? Waa imisa? Haddii haanta biyuhu buuxsamaan, qalabka hore ayaa u baahan inuu joojiyo biyaha. Ka dib marka heerka biyaha ee haanta biyaha uusan ku filnayn, nidaamka daaweynta ayaa loo baahan yahay in la xiro oo la ilaaliyo ilaa heerka biyuhu caadi ka noqdaan. Waxaas oo dhami waxay u baahan yihiin nidaamyo si otomaatig ah oo dhammaystiran oo isku -duwidda iyo xakamaynta si loo hubiyo in biyaha dib -u -habeynta aysan ku sumoobin jawiga.
Ujeedada fumigation ee haanta biyaha saafiga ah ee FRP, taangiga biyaha ee FRP RO iyo taangiga biyaha ee nitrogen-xiran ee FRP: Dhimista haanta biyaha FRP si loo dedejiyo qaadista haraaga TOC inta wax soo saarku socdo.
Hebei Zhaofeng Technology Protection Technology Co., Ltd. FRP taangiyada biyaha shaabadaysan ee nitrogen, haamaha biyaha ceyriinka ah, iyo haamaha biyaha RO ayaa guud ahaan loo adeegsadaa nidaamyada biyaha aadka u saafiga ah. Waxaa guud ahaan loo adeegsadaa sariiraha isku dhafan ama qalabka wax-ka-beddelka korontada ee EDI marka taangiyada biyaha kaydka loo baahan yahay in la dejiyo. Wakhtigan, waxaa inta badan la doorbidaa Tixgeli inaad isticmaasho haan-biyood oo lagu xiray nitrogen sida haan kayd ah. Dahaarka haanta biyaha ee nitrogen-shaabadeysan ee ay soo saartay shirkadeena waxaa laga sameeyay Dow Chemical 470 resin-nadaafad sare leh oo wax lagu durayo hal-shot, iyo fiber galaas aan alkali ahayn ayaa loo adeegsadaa dabaylaha farsamada kombiyuutarka ee kontaroolka badan.
Hebei Zhaofeng Technology Protection Technology Co., Ltd. waxay soo saartay qalab kaydin oo muhiim ah oo loo adeegsan karo biyaha dib loo soo celiyey, biyaha saafiga ah, biyaha aadka u saafiga ah, biyaha wasakhda ah, iyo dheecaanka iyada oo loo marayo tijaabooyin joogto ah iyo ardayda qalin-jabisay-FRP/FRP biyo saafi ah Taangiyada/kaydka Haamaha, haamaha biyaha ee nitrogen oo la shaabadeeyey, taangiyada biyaha ee RO, haamaha biyaha dhaadheer. Sida waafaqsan shuruudaha macmiilka, waxaan ku hagaajin karnaa weel adiga kugu habboon.
Hore: Xiriirka flange
Xiga: FRP Haanta kaydinta cuntada
Haamaha Kaydinta Biyaha Fiberglass
Haamaha Kaydka Frp Acid Iyo Alkali
Haanta Kaydinta Cuntada ee Frp
Haanta Kaydka Baaxad Weyn ee Frp
Haanta Kaydka Frp
Haamaha Kaydka Biyaha ee Frp Ultrapure